Toti Martínez de Lezea: «Zvakaitika uye nzira yekuona hupenyu hazvichinji» | Zvazvino Zvinyorwa
Toti Martínez de Lezea: «Zvinoitika uye nzira yekuona hupenyu hazvichinji»
Kutora mifananidzo: Facebook nhoroondo yaToti Martínez de Lezea.
Toti Martinez de Lezea ane refu uye chaizvo kuzivikanwa trajectory senge munyori wenhoroondo munyori. Kune akawanda mazita akadai Shongwe dzeSancho, Iyo mishonga yemakwenzi, Uye dzese dzakanyarara, Iyo heath, Enda, Itahisa, Iyo yakatsemurwa cheni kana Nyika yemukaka neuchi. Uye imwe nyowani yakatimirira muna Gumiguru.
Muhurukuro iyi inotiudza zvishoma nezvake mabhuku, vanyori y mavara vadikani, pamusoro pekutarisira izvozvo kusunungurwa kutsva uye utiudze kuti anoona sei iyo yekugadzirisa panorama zvazvino Ndinotenda zvikuru mutsa wako mukuru uye nenguva yakatsaurirwa.
Kutaurirana naTotal MARTÍNEZ DE LEZEA
TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA: Zvakawanda sekurangarira bhuku rekutanga randakaverenga… yave nguva! Ini ndinogona kukuudza iwe kuti terevhizheni yakapinda mumba mangu pandaive ndingangoita makore gumi nematatu ekuberekwa uye kuti vese vabereki vangu vaive vaverengi vakura uye ini ndakakurira pakati pemabhuku. Ini zvakare ndoziva kuti kuverenga kwangu kwekutanga ndiko kwaive Andersen ngano, avo vehama Grimm, all Ngano dzeBasque inounganidzwa na don Jose Miguel de Barandiaran pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX.
Kana iri nyaya yekutanga yandakanyora… ndaigona kunyora pachikoro chesekondari! ndanga munyori wepaterevhizheni, Ndakaunganidza mapoka maviri e theatre uyewo akanyora Ini the zvinyorwa, asi ngatitii yekutanga mukunyora kwangu yaive Abbess, kunyange hazvo yakatanga kubudiswa yaive Mugwagwa wekota yechiJuda in 1998.
TML: Mhinduro yacho yakati rebei kana kufanana, ini handirangariri, kunyangwe ndichiyeuka zvinoshanda senge Kuverenga kweMonte Cristo, yaDhuma, Zviuru makumi maviri zvemitambo yekufamba pasi pemvura, naJules Verne, kana Pfuma chitsuwanaStevenson, iyo yandakaverenga ndichiri mudiki kwazvo. Kuverenga ikoko kwakanditungamira kuti ndide zvimwe uye izvozvi raibhurari yedu mhuri ine nezve Mabhuku e15.000.
Nei vakandivhundutsa? Nekuti ivo vakatanga ini munhoroondo uye kufamba, mutsika dzisingazivikanwe, mararamiro, adventures, tsika… Uye ini ndinopfuurira!
TML: Handina hapana y ndine vazhinji. Imwe yenguva dzangu yakave nevanyori vayo, zvinoenderana nezvakandifadza panguva imwe neimwe. Dai ndaifanirwa kutaura mashoma, ini handizive ... Victor Hugo, Dumas, Tolstoï, Dostoevsky, Zola… Ndine zana ramakore regumi nemapfumbamwe!
TML: Heh heh heh, mubvunzo wakadii! Sangana pamwe Jean valjean, protagonist we Zvinoshungurudza, oa Edmond dantès de Kuverenga kweMonte Cristo. Kana zviri zvekugadzira kune chero hunhu hwakatogadzirwa, zvakanaka kune hapana. Mumwe munyori ane nyika yake, uye protagonists ayo mabasa ekufungidzira; zviitiko uye nenzira yekuona hupenyu hazvichinjike.
TML: Ndaiwanzobatidza mudzanga, uyo waiwanzopiswa muguruva remadota. Iye zvino ndakarega kusvuta, asi chandinoita ndechekuti ridza mumhanzi. Zvese kana ini ndichinyora uye pandinoverenga ndinotsvaga inzwi kundiperekedza, kundibatsira neimwe nzira dzokorora izvo zvandinoverenga kana kunyora.
TML: Ndine imba yekushandira. Verenga ndinozviita chero kupiKunyangwe mukicheni ndakamirira kuti macaroni ibike! Kazhinji Ndinonyora ndapedza kudya uye kusvika panguva yekudya kwemanheru. Dzimwe nguva ndinoenderera mberi kunyangwe nguva dzemangwanani, pakati pemaawa matanhatu neasere zuva nezuva.
TML: Ndinofungidzira vamwe. Paunenge uri muverengi wemhizha, kana iwe waverenga mabhuku asingaverengeke nevanyori vakasiyana kwazvo, masitaera, mafomu, mafomu, madimikira, zvese zvinokanganisa, zvinoramba zviri mukuziva, kunyanya kana zvasvika pakunyora. Ini handina munyori kana rimwe basa, asi ichokwadi kuti Ini ndinofarira nezve XNUMXth century mabhuku, saka pamwe simba rinobva ipapo.
TML: Chero ani ane chimwe chinhu chinonakidza kundiudza. Ini handifarire kuverenga kungoverenga ndisinga tarise kune imwe mamiriro ezvinhu, nguva kana zviitiko kumashure kwayo. Semuenzaniso, pamusoro pekunyorwa zvakanaka, mhosva kana mutambo wenhau, saka zvinozivikanwa izvozvi, iwe unofanirwa kundiudza zvinopfuura kumwe kana kumwe kuponda kana kuti tsananguro yehumwe hukama hwepabonde. Unofanira kuva mamiriro, kushoropodza kana kutonga yezvokwadi uye mavara akanangana, zvikasadaro ndinorasikirwa nechido uye handizvipedze.
TML: Ndichangopedza rakanakisa bhuku rakanzi Infinity mutsanga, naIrene Vallejo. Zviri Ensayo ko nezve kugadzirwa kwemabhuku munyika dzekare, chinofadza chaicho manyorerwo azvinoitwa uye kuti chii chakakosha. Kwave kuri kuwanikwa. Uye ini ndichangotanga Mongo Muchena, ivo Carlos Barden, nyaya yakaoma nezvehuranda muzana ramakore rechiXNUMX uye mukundi wemubhadharo weSpartaco Prize yeNhoroondo dzeNoveli.
Kana zviri zvekunyora, ndagara ndakuudza izvo Ndapedza inovel yegore rino muna Kukadzi. Ichabuda mukati octubre kana uko. Musoro: Mupepeti, Uye haisi nhoroondo, kana pamwe ndizvo?
TML: Zvakaipa zvakaipa… Zvagara zviripo, asi ikozvino zvanyanya nekuda kwemamiriro azvino uye matekinoroji matsva: Internet, network, mapuratifomu ... Kune rimwe divi, hapana vaverengi vemabhuku akawanda seanoburitswaUye pane chimwe chinhu: chero basa rinoda ruzivo uye ruzivo, asi zvinoitika kuti tinodzidza kunyora nemakore mashanu. Kuisa mazwi pamwechete hazvireve kuti unoziva kunyora bhuku, sekuimba zvinonzwika hazvireve kuti mumwe muimbi weopera. Pane matatu mamiriro ekuve munyori: wakaverenga zvakawanda, shandisa nguva uye, kunyanya, ndine chekutaura, chimwe chinhu chisiri nyore sezvachinoratidzika.
TML: Chaizvoizvo, hazvisi kundidhurira zvakanyanya. Tinogara mutaundi, tine gadheni remuriwo, hatifanire kubuda, uye nguva yedu inopfuura pakati pemimhanzi nemabhuku. Kunyangwe chiri chokwadi icho ndine husimbe zvisina kujeka. Ini handina kunyora mutsetse mumwedzi mina iyi, pamwe nekuti gore rino runyorwa rwakatopedzwa, saka ini handisi mukumhanya. Handifunge kuti ndichachengeta chero eaya mamiriro, Kunze kwekubiridzira uye kutonga kuri kuitirwa vagariwo zvavo, senguva dzose, isu tinobhadhara uye tinobhadhara mhedzisiro yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Toti Martínez de Lezea: «Zvinoitika uye nzira yekuona hupenyu hazvichinji»